Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "dhiyabhorosi", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "dhiyabhorosi", iro shamwari manzwiro?
"Dhiyabhorosi" pakati 3500 Yen kune zvinoreva
nyanzvi kufembera of "dhiyabhorosi" neizvi nzvimbo usununguke yokunyatsoongorora nzira
vachishandisa kadhi, mwoyo wako rinosanganisira manzwiro akadai chido uye negodo kuti murume ane zvinomirira ipapo mamiriro ezvinhu. Vanhu Unogona nokusaziva dzimwe nguva kuva guru makaro, kuti haagoni zvakadzikama kutonga nyaya, angasarudza kuti mugumisiro wacho vakatonga pfungwa makaro uye godo.
"dhiyabhorosi" ndiro anoratidza kuti akaiswa mumamiriro ezvinhu akadaro. Usamborega, kwete chimwe ine dudziro yakanaka, asi haugoni kutarisira nemigumisiro yakanaka chaizvo uyewo mune neizvi chinzvimbo zvakarurama nzvimbo, zvichienderana sei ichocho angakwanisa kutendeuka zvabuda. Kuti
anokumhan'arira kuti kunzwa zvakanaka nzvimbo "dhiyabhorosi" zvinofanirwa kureva
"dhiyabhorosi" iri kana uri kunze kwagara chinzvimbo, pfungwa haisi akadzikama, hunodzorwa nemakaro zvichireva rinomiririra. Kune zvinhu zvakawanda nemakaro, haana yakanaka haana chido uye godo, kufunganya, negodo, kuzvikudza, rakati nyangarara nemanzwiro akadai Jashin pfungwa, kunyange kana zviri chete kunzwa Sakibashi 'kuva simbe zvingangoitika yaizova dzakakwirira.
In rudo, waunowana kwekuisa ane anokumhan'arira kuti kunetseka, vaizopiwa waitsimbirira manzwiro angu chete kuti anokumhan'arira, mutoro kana achinge wakatsemuka muukama hwavo, uyewo wakadaro manzwiro avo shamwari Panewo mukana kuti anova. Sezvo pane mukuru wokuti kuti mashoko avo nezviito zvichaita kure zvikuru manzwiro ake, uye zviri nani kurega kupupura kwake rusina kukwana mberi rudo. Kana iwe
"dhiyabhorosi" akabuda yakanaka nechinzvimbo, zvakadzikama kubvuma kuti zvinhu hazvina kunaka kwazvo, zvinokosha kuziva sezvo chinangwa funga nezvezvinhu. Nokuti manzwiro ake havasi kutarira kwamuri, kuchenjera kumirira mugumisiro zvichachinja apo kuramba napo imwe kure.
of "dhiyabhorosi" Kana manzwiro mamwe webato
zvinopesana neizvi nzvimbo Vanzveri rinoreva "dhiyabhorosi" akabuda ari neizvi chinzvimbo, achizvimukira, riri mu kumbobvira kwete ezvinhu zvakanaka, akaita kuti nezvevashumiri anaerobic zvichiguma kwokungotaura zvinoreva kuti. Muchiitiko chino, kana zvichibvira kurasa zvido nokuchiva kwenyika, asi unogona atendeuke kana anogona kugadzirisa dambudziko, uye kuramba ezvinhu vari rinosundwa makaro, mamiriro ezvinhu hakuzovi kumbobvira Somugumisiro akanaka.
parudo, nekuti manzwiro ake hazvisi akakodzera kwamuri, zvingava zvakakodzera kuti kuedza kurasa kudanana manzwiro akadaro kamwe. My chete kubva rurege waitsimbirira mudzivisi manzwiro aizonzwa kune dzimwe bato mutoro, achava kuitwa zvakawanda kubva kwamuri.
Hazvina kushanda kunyange zviri iyi, nokuti avo kuti takatsunga ne aibuda guru zvaitika kuti hazvigoni kutsiviwa woga, kubudikidza kubvisa kukara uye manzwiro kuti kusiya muviri iyerere, zvinhu zviri nani unogona kumirira kusvika.